NepalUpclose.com - Gorkhapatra - दुर्घटनामा ११ यात्रुको निधन
Gorkhapatra - दुर्घटनामा ११ यात्रुको निधन
डँडेल्धुराबाट महेन्द्रनगरतर्फ आउँदै गरेको से. १ ख ५०२ नम्बरको यात्रुबाहक माइक्रोबस डोटीको छतिवन गाविस-९ रुबसकाडामा मङ्गलबार बिहान दुर्घटना हुँदा १० जनाको घटनास्थलमै र एक जनाको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको छ।
दुर्घटनामा परी पिपलाडी-५ कञ्चनपुरका ३० बर्षीय कैलाशदत्त जोशी, मल्लादेही बैतडीका ४२ बर्षीय जगन्नाथ बोहरा, भारत बरेलीका ३५ वषर्ीय फिदा हुसेन, सिलङ्गा बैतडीका ३८ बर्षीय धीरज पन्त, घण्टेश्वर-१ डोटीका २८ बर्षीय चन्द्रबहादुर बिक, भागेश्वर-७ लामीटाडे
थलाकुडी डँडेल्धुराकी ६० वषर्ीया जानकीदेवी जोशी, रूपाल-५ रुइनपाट डँडेल्धुराकी ३८ वषर्ीया चन्द्रदेवी पाण्डेय, चिपुर-९ डँडेल्धुराका ४५ वषर्ीय बलबहादुर ऐरीको घटनास्थलमा मृत्यु भएको थियो।
डोटीमा माइक्रो खस्दा १० को मृत्यु
डडेलधुराबाट महेन्द्रनगरतर्फ जाँदै गरेको यात्रुवाहक माइक्रो बस डोटीको छतिवन गाविस वडा नं. ९ रुवसकाडामा पल्टँदा १० जनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ। बिहान सवा ८ बजे महाकाली यातायातको से १ ख ५०२ नम्वरको हाइस बस सडकबाट डेढ सय मिटर तल खसेको हो। वुडर प्रहरी चौकीका असई दानसिंह भाटका अनुसार घाइते ५ जनालाई वुडरस्थित पद्मा अस्पतालमा पठाइएको छ।
डोटीमा माइक्रोबस दुर्घटना, १० जनाको मृत्यु
११ असार, काठमाण्डौ । डडेलधुराबाट महेन्द्रनगर जाँदै गरेको माइक्रोबस दुर्घटना हुँदा १० जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्य ८ जना घाइते भएका छन् ।
महाकाली यातायातको से १ ख ५०२ नम्बरको माइक्रोबस बिहान करिव सवा...
डोटीमा महिनैपिच्छे सवारी दुर्घटना
खिरसैनमा जेठ १७ गते १३ जनाको ज्यान जाने गरी भएको जिप दुर्घटना बिर्सन नपाउँदै मंगलबार बिहान छतिवनमा माइक्रो सडकबाट खस्दा ११ जनाको मृत्यु भयो । यसअघि रानागाउँमा वैशाख १४ गते जन्तीको जिप पल्टँदा पनि डोटीवासी यसैगरी मर्माहत भएका थिए । महिनैपिच्छे शृंखलाबद्ध सवारी दुर्घटना बढेपछि डोटेली चिन्तित बनेका छन् । वैशाखयता मात्रै २९ को मृत्यु भइसकेको छ । सामान्
माइक्रो दुर्घटनामा परेकी थप महिलाको मृत्यु
डोटी, असार १३ - डोटीको छतिवन गाविस रुपसकाँडामा मंगलबार भएको माइक्रोबस दुर्घटनामा परी घाइते भएकी थप एक महिलाको मृत्यु भएको छ । गंम्भीर घाइते भएकी चिपुर डडेल्धुराकी ३० बर्षीया सन्ध्या महत्ताको उपचारका क्रममा भारतको बरेलीमा मंगलबार राति मृत्यु भएको हो । दुर्घटनामा परी मर्नेको संख्या १२ पुगेको छ ।